Isibheno esiSelfowni-Ukuphonononga uMhlaba oHlanganisiweyo weSelfowuni | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 20, 2013 UAdam Omncinci
Usetyenziso olungakumbi lwe-smartphone kunabantwana? Into malunga noko ibonakala iyothusa… kwaye iyoyikeka ngaxeshanye. Ekuqwalaseleni imeko-bume yezicelo, kubonakala ngathi kukho itoni yemidlalo, kodwa iinkqubo zokusebenza kwemveliso zisalele ngasemva. Ndiqinisekile ukuba uzakuwabona la manani ehambelana ngokusondeleyo kwixa elizayo, nangona kunjalo, njengoko iinkampani ezininzi nangakumbi zamashishini zamkela ubuchule beselfowuni njengenxalenye yemihla ngemihla ishishini.
Ayisiatsho ukuba ii-smartphones kunye nezinye izixhobo eziphathwayo ziye zafikelela kwinqanaba lokufumaneka kuyo yonke into. Sizisebenzisa yonke imihla, kuyo yonke into ekwenzeni ugcino lwehotele, ukujonga iiakhawunti zethu zebhanki, uku-odola ipitsa nokunye. Kwaye ngaphezulu kwe-1.5 yezigidi zeapps ezikhoyo kwiApple App Store nakwiGoogle Play, abathengi banenani elingenamda lokukhetha onokukhetha kuzo. Ukusuka kwi-Relic infographic entsha, Isibheno esikwiselfowuni: Kutheni ikamva liSelfowuni.
tags: kwi-infographicusetyenziso lweselulaisibheno esiphathwayoI-Relic entsha
Ubungozi be-SEO kunye nendlela yokuPhumeza iSicwangciso esingenasiphako